आज डलरको भाउ घट्यो, यूरोको बढ्यो, कुन देशको कति ?
चैत १२, २०७६, बुधबार
काठमाडौँ । आज (बुधबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १२१ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकेको छ। &nb...
अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै महंगो, कुन देशको कति ?
चैत ११, २०७६, मंगलबार
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर अहिलेसम्मकै महंगो भएको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १२२ रुपैयाँ ३४ पैसा तोक...
आज पनि बढ्याे सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
काठमाडौं । आज पनि सुनको भाउ बढेको छ । साेमबार सुन प्रति तोला ७६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेकोमा आज ७७ हजार प्रतिताेलामा काराेबार भइरहेकाे छ । आज तेजाबी सुन प्रतितोला ७६ हजार ७...
काठमाडौँ । आज (सोमबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर अहिलेसम्मकै घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ। ...
कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारले कुनै पनि ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न निर्देशन दिए पनि भक्तपुरका सबै बैंकमा आज सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लागेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सूर्यविनायक शाखा...
फेरि बढ्याे सुनचाँदीको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौं । आज सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । आइतबार सुन प्रति तोलामा १ हजार र चाँदी २० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएकाे छ । आइतबार छापावाल सुन प्रति तोला ७६ हजार ५०० रुपै...
काठमाडौँ । आज (आइतबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर अहिलेसम्मकै महंगो बनेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ६८ पैसा तोकेको छ।&...
काठमाडौँ । आज (शनिबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर ह्वात्तै बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ...
काठमाडौं । आज सुन तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेकाे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा रु ५०० ले बढेर प्रतितोला रु ७५ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । &nb...
फेरी बढ्यो डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ । विशिबार डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री...